Posted by coral nyo at 10:35
ဒီလို သိတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေရှိသလို တမင်ဟန်ဆောင်လိမ်ညာနေတဲ့ လူတွေလည်း ရှိသေးပါတယ်..
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လိမ်ညာလှည့်ဖြားခြင်း ကင်းကြစေလိုတယ်.. မဖြစ်နိုင်မှန်းသိရင် ရှေ့မတိုးဘဲ နောက်ဆုတ်ကြတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ..
နှမသားချင်း မစာနာပဲ လိမ်လည်လှည့်ဖျားပြီး မမိုးပြောသလို Game အနေနဲ့ ကစားနေတဲ့သူတွေကို ရှုံ့ချပါတယ်..။
ဒါဟာ သူဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ . . . ရယူဖို့ လွယ်လွန်းတဲ့ အရာတခုကို သူ မှန်ကန်တဲ့ အသိနဲ့ ပြန်တွန်းထုတ်ခဲ့တာ သူ့ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ . . .
ကစားပွဲ ဂိမ်းကိုတော့ လုံးဝ ရွံမုန်းမိတယ်ဗျ
အလိမ်တွေများနေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ဒါမျိုးလူကိုတောင် ကြံဖန်ချီးကျူးရမလို ဖြစ်နေပြီ...
ညီမလေးမိုးငွေ့...ဒီထဲက လူဟာ လူကောင်းတယောက်ပဲ ညီမရေ...
အဲသလို ရှောင်ထွက်နိူင်ရင်ပဲ တော်လှပါပြီ...အစထဲက အမှန်အတိုင်း ပြောပြထားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့.....
ဟုတ်တယ် အစ်မမိုးငွေ့ရေ....ရှုပ်ထွေးပွေလီလိုက်တဲ့ အွန်လိုင်းလောကနော်....။ ဒီလူက အသိစိတ်ဓါတ်ရှိစွာနဲ့ နောက်ဆုတ်ခဲ့တာ မှန်ပါတယ်။ ကောင်မလေး ခံစားရမယ်ဆိုလည်း ခဏပေါ့။ အွန်လိုင်းအသုံးပြုကြတဲ့အခါ လူတွေမှာ စည်းလေးတွေ ရှိကြရင်ကောင်းမယ်။
ဟင်း ... ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး .. မှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာ ပြုလုပ်ကြတဲ့လူတွေ အပေါ်မူတည်ပါတယ် ... ကျွန်တော်ကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် စည်းဝိုင်း အပြင်မှာပဲ နေချင်တယ် ...
သိပ်အတွေးမများသွားပါနဲ့ .. အစ်မ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်တွေးပြီး ရေးသွားပါဧ။် ..
နှလုံးသားကို Game တစ်ခုလို့ ကစားရင်
တော့ ဘ၀က ကဗျာဘယ်တော့မှာဆန်မှာ
ဒီပို့ စ်မှာစောစောစီးစီး နားလည်မှုရသွား
တဲ့ ဆရာသမားကိုလေးစားမိပါရဲ့ ဗျာ
သမီးလည်း 'ကိုကြီး..ကိုကြီး' နဲ့ ကစားစရာ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲလေ...:P
12 October 2010 at 05:55